Gegada diyaaradaha caalamiga ah ee Rome waxaa loogu magac daray Leonardo da Vinci, oo ka mid ah kuwa fikirka wax ku biiriyay dhammaadkii qarniyadii dhexe iyo abuuritaanka dib u dhalashada ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: July 28, 2019 12: 00 No Comments
Muusena wuxuu lahaa astaamo isku mid ah, maxaa yeelay mar labaad ayuu ku soo barbaaray gurigii Fircoon, kii uu wiilkiisii ​​Fircoon ku amray in la dilo dhammaan ragga Cibraaniga ah ...	Akhri wax dheeraad ah
Su'aasha murugada leh, yaa ahaa Philo ee Alexandria? Falsafadda Reer Galbeedka ee Antiquity, oo casriga u ah bilawgii qarnigii Masiixiga (qiyaastii -20 - qiyaastii 45 AD), Hellenized Yahuud (qaatay qaatay cibaadada ama dhaqanka Giriigta, wuxuu yahay nin Yuhuudi ah oo ka mid ah qurba)
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 14, 2019 12: 00 No Comments
Wuxuu qoray ku dhawaad ​​konton buugaag ah, oo ay ku jiraan afartan af Ingiriis loo turjumay. Wuxuu ku noolaa magaalada Alexandria (863 KM Israel u jirta). Waxaa mudan in la xuso, ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 25, 2019 4: 00 No Comments
Maanta, wax walbaa waa dijital iyo dijitaal iyo dijital. Wax walba waxaa lagu sameeyaa shaashadaha kumbuyuutarrada iyo taleefannada casriga ah. Caadooyinkan wanaagsan ee aqrinta buugaagta qoyska waxay leeyihiin khilaaf…	Akhri wax dheeraad ah
Lipaka Paka: waa caleen mango, oo ku filan in lagu sameeyo diyaarad soo saarta hawada, inta ay ku socoto dabaysha, soosaarahuhu wuu leexanayaa
Maxay Kemet u tahay mawduuca daraasadaha darajada Afro-centrist? Markay walaalaha jaahil ahi i waydinayaan sababta cilmi baadhayaasha qarniga afrikaanka ah iyo taariikhyahanada Afrikaanka ahi ay u danaynayaan Kemet ee Afrika, jawaabta kaliya ee maskaxdayda ku timaadda ayaa ah inaan isweydiiyo su'aalahan:
Fikradaha diimaha Ibraahim, Ilaah wuxuu dib u soo celiyaa qorraxda 10 digrii: ("Ishacyaah 38: 7" Oo kanu waa xagga Rabbiga, calaamad aad ku garan doontid in Rabbigu oofiyo eraygii uu ku hadlay)
Feb24 11: 07